Xaqiiqooyin U Gaar Ah Suniel Shetty Filimkiisa Wacan Krishna | Filimside –
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Suniel Shetty Filimkiisa Wacan Krishna
Krishna waa filim Hindi ah kaasi oo ay Bollywood-ka sameeyeen 21-sano ka hor waxaana la daawaday 2 August 1996 asigoo guul wacan gaaray.
Krishna waa mid ka mid ah aflaanta Suniel Shetty kaligiis hogaamiye ka yahay ee Boxoffice-ka gil gilay sidoo kalena uu xidigaan amaan balaaran ku helay bandhigiisa.
Jilaayaasha filimka Krishna: Sunil Shetty, Karishma Kapoor, Om Puri, Shakti Kapoor, Tinu Anand iyo kuwo kale
Fadlan hoos kaga bogo xaqiiqooyin u gaar ah filimka Krishna oo Average noqday natiijo ahaan sanadii 1996:
Xaqiiqada 1-aad: Krishna wuxuu ku furmay si waali ah maalintiisii kowaad sanadii 1996 asigoo keenay 79 Lakh maalinkii tiyaatarada la saaray wuxuu noqday filimka labaad ee ugu bilaabashada wanagsanaa 1996 kaliya Khiladiyon Ka Khiladi (90 Lakh) balse qaybaha dambe ee sanadkaas Jeet (82 Lakh) iyo Ghatak (80 Lakh) ayaa ka bilaabasho wanaagsanaadeen.
Xaqiiqada 2-aad: Krishna waa filimka kaliya ee sanadii 1996 Suniel Shetty u guuleestay dhanka Boxoffice-ka madaama 5-tiisa filim ee kale wada guul dareesteen sida Sapoot, Rakshak, Shastra, Vishwasghaat iyo Ek Tha Raja oo Flop wada noqdeen.
Xaqiiqada 3-aad: Krishna wuxuu ahaa filimka labaad ee Suniel Shetty iyo Karishma Kapoor wada sameeyeen xiligaas waxaana kaga horeeyay Gopi Kishen oo isagana sanadii 1994 guul wacan gaaray.
Xaqiiqada 4-aad: Suniel Shetty sameynta filimka Krishna wuxuu ku qaatay 2 Crore ayadoo la xaqiijiyay sanadii 1996 inuu noqday atooraha lacagaha ugu badan filimada ku Hindiga ku sameeyo.
Xaqiiqada 5-aad: Filimka Krishna markii tiyaatarada la saaray waxaa dhacday in dadka badankooda tikit-yo waayeen sidoo kalena saacado badan laamiyada ugu caansan gudaha Hindiya xirmeen saxmad awgeed, madaama qof walbo uu rabay inuu Krishna daawado madaama filimkaan hadal heyntiisa aad u sareesay!
Xaqiiqada 6-aad: Heesta ‘Jhanjharia’ waxay noqotay mid Classic ah oo 90-maadkii ka mid noqotay heesihii ugu caansanaa ee Bollywood-ka sameeyeen ayadoo Top Hit noqotay.
Inta badan jilaayaasha Bollywood-ka ayaa masrax walbo heesta ‘Jhanjharia’ ka qaadi jireen marka xaflad lagu casuumo waxaana heestan badanaa fagaarayaasha ka qaadi jireen SRK, Salman Khan, Akshay Kumar, Govinda, Madhuri Dixit iyo Juhi Chawla oo aad uga heleen qaabka loo sameeyay.
Fadlan hoos kaga bogo heeska ‘Jhanjharia’ iyo labada siyaabood ee loo qaaday kuna jirto filimka Krishna:
Waxaa Aqriyay: 1,773
filmside nala wadaga xaqiiqoyinka ugar ah filmka KHILADIYON KA KHILADI
sxb Krishna sooma aha filimkii waziirka qorta kagoynay
Haa waa isaga sxb